चलचित्र विकास बोर्डको १८औं बार्षिक उत्सवमा दुई फिल्म पुरस्कृतFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
चलचित्र विकास बोर्डको १८औं बार्षिक उत्सवमा दुई फिल्म पुरस्कृत
फिल्मी फण्डा । नेपाली फिल्म क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका निमित स्थापित नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो १८ औं बार्षिक उत्सव भव्यरुपमा मनाएको छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई स्वयत्तता दिदै वि.स.२०५७ सालमा सुचना तथा संचार मन्त्रालय मातहत रहनेगरी चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना भएको थियो । र, बोर्डले आफ्ना १८ बर्ष पुरा गरेको छ । बोर्डले आफ्नो बार्षिक उत्सव समारोहकाबीच आफ्ना भावि कार्य योजना समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
जस अन्तर्गत नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बृहत्तर हितका लागि बक्स अफिस प्रणालीलाई आर्थिक बर्ष २०७५/७६ भित्रै लागु गरी सक्ने लक्ष्य बोर्डले राखेको छ । यस्तै राष्ट्रिय चलचित्र विकास नीति लागु हुन नसक्दा चलचित्र क्षेत्रले सोचे जस्तो उपलब्धी प्राप्त गर्न सकी रहेको छैन् । तसर्थ यही अर्थिक बर्ष भित्र नै राष्ट्रिय चलचित्र विकास नीति लागु पर्ने बोर्डको तयारी छ । नेपालको पहिलो चलचित्र आमा र पहिलो रंगिन चलचित्र कुमारीलाई डिजिटलाइजेसन गरेसंगै पुनः प्रदर्शन गर्ने र तत्कालिन शाही नेपाल चलचित्र संस्थानबाट निर्माण भएका १२ वटा चलचित्रहरुलाई चलचित्र महोत्सवद्धारा प्रदर्शन गर्ने योजना बोर्डले अघि सारेको छ ।
यस्तै नेपाललाई अन्र्तराष्ट्रिय सुटिङहवका रुपमा बिस्तार गर्न अन्र्तराष्ट्रियस्तरको. फिल्म सिटीसंगै काठमाण्डौं आपसापकै क्षेत्रमा एउटा सुविधा सम्पन्न सुटिङ स्टुडियो निर्माण गर्ने लक्ष्य बोर्डले राखेको छ । माननिय सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकूल बासकोटाको प्रमूख आतिथ्यसमा सम्पन्न कार्यक्रमका बीच २ वटा बिशेष चलचित्रलाई बोर्डले पुरस्कृत गरेको छ । शिवम् अधिकारी निर्देशित पंचायत र घनश्याम लामिछानेद्धारा निर्देशित फिल्म अग्नी दहनलाई पुरस्कृत गरेको हो ।